Vegas Crime Simulator 3.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.5 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Vegas Crime Simulator
Vegas Crime Simulator ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
* စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်း: သင် Vegas မှာရာဇဝတ်သားအရှိဆုံး Hotspot တွေအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်!
Vegasan ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတွင်ထင်ရှား။ , သူသည်သာမန်နိုင်ငံသားတွေတိုက်ခိုက်ရဲတဦးသေဆုံး, မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုခိုးယူခြင်းဖြစ်သည်။ သင် super လူကြမ်းဖြစ်လာမှထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းများပေးအပ်ကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောခဲယမ်းမီးကျောက်နှင့်လက်နက်အများအပြားကသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဖြစ်ကြ၏။ Vegas မှာရာဇဝတ်သားလမ်းများပေါ်တွင်တစ်ဦးအကြီးအကဲဖြစ်လာ!
Vegas Crime Simulator အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Vegas Crime Simulator အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Vegas Crime Simulator အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Vegas Crime Simulator အား အခ်က္ျပပါ
lamune စတိုး 49.22k 14.53M
Vegas Crime Simulator ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Vegas Crime Simulator အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Mine Games Craft
လက်မှတ် SHA1: B7:01:44:ED:51:56:DA:A1:36:F5:5A:02:A8:85:E6:74:FC:1E:37:40
အဖွဲ့အစည်း (O): Mine Games Craft
Vegas Crime Simulator APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ